Ciidamada Puntland oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Buuraha Golis - Jowhar somali news leader
Home NEWS Ciidamada Puntland oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Buuraha Golis
Ciidamada Puntland oo howlgal qorsheysan ka fuliyay Buuraha Golis
Wararka ka imanaya Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen Buuraleyda Golis ee gobolka Bari ciidanka loo yaqaan PMPF lagu diley dagaalamayaal ka tirsan Alshabaab.
Howlgalkaan ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalamayaal iyo saraakiil sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Wararka ayaa waxa kale oo ay sheegayaan in howlgalkan lagu soo furtay hun nooca fudud ah iyo qalab kale, oo ay u isticmaali jireen dagaalka, sida ay sheegeen saraakiil u hadashay ciidamada gaarka ah ee PMPF.
Howlgalkan ayaa saraakiishu sheegeen inay ku soo qabteen qaar ka mid ah maxaabiistii dhowaan lagala baxay xabsiga magaalada Boosaaso.
Howlgalkan ay ciidamada Puntland ka fuliyeen buuraleyda gobolka Bari, ayaa ku soo aadaya iyadoo dhawaan ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen xabsiga dhexe ee magaalada Boosaaso, halkaas oo ay sheegeen inay ka furteen 400 oo maxbuus.
Previous articleRa’iisul Wasaare Rooble oo tacsi ugu tegey qoyska Madaxweynihii hore Marxuum Cali Mahdi
Next articleSacudi Carabiya oo ka iibsanaya Drones dowlada Turkiga